नेपालका दुई चिकित्सकलाई वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड #Healthaward • Health News Nepal
नेपालको चिकित्सकले यो अवार्ड पहिलो पटक पाएका हुन्।
काठमाडौं, ०४ पौष २०७७
नेपालका दुई चिकित्सकलाई यस वर्षको वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड प्रदान गरिने भएको छ।
अवार्ड पाउनेमा डा. पशुपति महत र डा. अरूण राज कुँवर रहेका छन्।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका चिकित्सकलाइ स्विस फाउण्डेसनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यका सो अवार्ड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वर्षमा एक पटक दिइने यो अवार्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाकारी काम गर्ने चिकत्सकलाई दिने गरिन्छ।
नेपालको चिकित्सकले. यो अवार्ड पहिलो पटक पाएका हुन्।
डा.महत नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल साइकोलोजिस्टका अध्यक्ष हुन।
त्यस्तै कुँवर नेपालको पहिलो बाल साइक्याट्रिक हुन। कुँवरले कान्ति बाल अस्पतालमा बाल मानसिक रोग युनिटको नेतृत्व गरिरहेका छन।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryCorona Virus #Covid19Dr.Arun Raj AwasthiDr.Pashupati MahatWorld health award
Pingback: बेलायतमा जाने चिकित्सकका लागि प्ल्याब तयारी कक्षा नेपालमै #Medicos • Health News Nepal